Hormuud News Saturday, March 24th, 2018 | 01:13
[Saturday, June 17th, 17] :: Sidee ku billaabatay xiisadda ka taagan Jabuuti & Eritrea?
Addis Ababa (RH) Waxaa meel xun mareysa xiisadda ka taagan waddamada dariska ah ee Jabuuti iyo Eritrea, kaddib markii jasiirada lagu muransan yahay ee Dumeera ay soo buux dhaafiyeen ciidamo ka socda dalka Eretria.
Dowladda Jabuuti ayaa tallaabadaas cambaareysay, waxaana wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti, Maxamuuud Cali Yuusuf uu sheegay in Jabuuti ay ka jawaabi doonto tallaabada xukuumadda Asmara.
Arrintan ayaa timid kaddib markii Qadar ay kala baxday ciidamadii nabad ilaalinta ee ka joogay jasiiradda Dumeera, maadama labada dal ay la kala safteyn waddamada Khaliijka ee is-haya.
Labada dal ayaa dagaallamay bishii June sannadkii 2008-dii, waxaana dagalkaas oo socday labo maalin ku dhintay kuna dhaawacmay ciidamo fara badan oo reer Jabuuti.
Baaqa Midowga Afrika
Guddoomiyaha Midowga Afrika Muusa Faki Maxamed, ayaa ugu baaqay labada dal in ay xaaladda dejiyaan isla markaana ay dajiyaan.
Midowga Afrika waxa kaloo uu sheegay in ergooyin uu u dirayo xadka labada dal si ay u soo eegaan xiisadda ka jirta waddamada ku yaalla Geeska Afrika.
Jabuuti waa dal ku yaalla meel istiraatiji ah, waa dal xiriir wanaagsan la leh quwadaha caalamka, waxaa saldhigyo millitari ku leh Mareykanka iyo Faransiiska, sidoo kale Shiinaha ayaa raba in uu saldhig millitari ka dhisto.
Dekedda Jabuuti waxaa wax ka dhoofsada kana soo dajista waddanka Itoobiya oo cadaawad qaraar ay kala dhexeyso.
Dalkan waa dal loo arko in adduunyada la go’doomiyey, waayo waxaa lagu eedeeyay in uu taageeray kacdoonka ka socda gobalka oo Soomaaliya ay ku jirto, waxaa la saaray cunaqabateyn xagga hubka iyo midd siyaasadda.
Si kastaba, golaha ammaanka QM ayaa Isniinta toddobaadkan shir albaabada u xiran ka yeelan doona arrintan.
Jaziiradda Dumeyra waxaa la sheegaa in 90% ay ku taallo Jabuuti dadka ku noolna ay u badan yihiin Jabuuti balse ka hor dagaalkii dhex maray labada dal sagaal sanno ka hor waxa ay ahayd meel ay isku gudbaan shacabka labada dal.
Qadar ayaa ciidamo nabad ilaalin u dirtay markii la codsaday in ay aagaas la dhigo ciidamo.
Buurta Dumeyra waa goob uu ku yaallo gacanka Baabal Mandab oo ah meel ay maraan maraakiibta caalamka u kala gooshta.
posted on Saturday, June 17th, 17